Ahoana ny fomba hahombiazanao amin'ny fialan-tsasatry ny fahasalamana - torohevitra voalohany ho an'ny fialantsasatra fahasalamana
Fialan-tsasatra irery sa miaraka amin'ny fianakaviana?
Inona ny hotely fahasalamana?
Ny fialantsasatra ho an'ny fahasalamana no tadiavin'ny ray aman-dreny maro. Mikarakara ny fahasalaman'ny ankohonanao isan'andro ianao, mikarakara ny tokantrano sy ny ankizy ary mandeha miasa eo am-pita. Noho izany dia manana mihoatra noho ny fahazoana miala sasatra ianao.
Toy izao no fahombiazan'ny vakansy fahasalamana
Alohan'ny hanombohanao ny adin-tsaina dia tokony handamina fotoana malalaka ianao hikarakarana ny fiadananao manokana. Ekena fa tsy mora izany. Izany indrindra no maha-zava-dehibe ny fampiasana tsara an'io fotoana malalaka io sy ny famerenana ireo bateria ohabolana.
Fialan-tsasatra amin'ny fahasalamana - © Dan Race / Adobe Stock
Aiza no handeha amin'ny fialantsasatra ara-pahasalamana?
Manomana fitsangatsangana kely any amin'ny hotely fahasalamana ve ianao sa te hampifangaro ny fialan-tsasatra isan-taona amin'ny fahasalamana? Ho fitsangatsanganana kely, toy ny fialantsasatra amin'ny faran'ny herinandro, tsara kokoa ny mitady paradisa fahasalamana ao anatin'ny 150 kilometatra miala ny toeram-ponenanao. Rehefa dinihina tokoa, ny fotoana malalaka dia tsy tokony holaniana amin'ny fotoana fitsangatsanganana lava.
Na eo aza ny dia lavitra ataonao na tsy afaka mampiasa andro vitsivitsy hanaovana fialantsasatra ara-pahasalamana ianao, dia mandania fotoana ary manaova fikarohana alohan'ny hanapahanao hevitra amin'ny hotely.
Tena tsy maintsy hôtely atao hoe wellness ve izany?
Ny fandroana mafana tsy miankina sasany dia manana tolotra mampiadana kokoa sy faritry ny fahasalamana. Safidy tsara kokoa angamba ny hipetraka tsara eo akaikin'ny fandroana mafana. Dingana vitsivitsy amin'ny rivotra madio manomboka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ka hatrany amin'ny faritra sauna dia azo antoka fa tsara ho anao, ary koa, ny fiheverana ny fahasalamana tany am-boalohany dia misy koa ny fanatanjahan-tena. Amin'ny ankapobeny, ny fahasalamana dia tsy mihoatra ny fanaovana sauna fotsiny, ny fanorana na ny fanaovana sarontava tarehy. Sakafo tsara ihany koa izy io, amin'ny hevitry ny matsiro sy mahasalama, miaina ny kolontsaina, ny maha-mety na ny filan'ny eritreritrao manokana.
Handeha hanao fialantsasatra ho an'ny fahasalamana irery ve ianao sa miaraka amin'ny mpiara-miasa na miaraka amin'ny fianakaviana manontolo mihitsy aza? Raha afaka miala andro vitsivitsy amin'ny maha-mpivady ianao dia ho faly mandritra ny roa andro.
Miara-mandry ao anaty tadio, rehefa misakafo hariva tsy misy fanelingelenana amin'ny labozia, mandehandeha eny an-dalambe ao an-tanàna amin'ny fomba milamina na mandeha mitsangatsangana nefa tsy misento zaza sy mifampiresaka be. Raha ny tokony ho izy dia toa izao na zavatra toa izany. Fa inona no fampiasana ny tolotra fahasalamana tsara indrindra raha mieritreritra momba ny trano sy ny ankizy foana ianao, raha afaka miantso ny mpitaiza isan'ora nefa tsy mahita tory?
Tsy afaka mankafy fialantsasatra amin'ny fahasalamana fotsiny ianao raha raisina tsara ny ankizy. Raha tia miaraka amin'ny raiben'izy ireo ny zanakao, dia tsy mila miahiahy ianao, ny raibe sy ny dadabe dia hikarakara tsara ny ankizy kely. Ny zanakao dia homena olon-kafa raha matoky azy ianao. Raha tsy manao izany ianao, na raha miahiahy ianao fa mitomany anao ny ankizy dia tsy hanana traikefa tena tsara ianao. Avy eo safidy roa ihany no azonao.
Na mifandimby manao fialan-tsasatra amin'ny fialan-tsasatra ianao raha ny ray aman-dreny iray kosa no mandray ny andraikinao any an-trano na mitondra ireo kely fotsiny ianao.
Eny, mamaky izany ianao, mikarakara fialantsasatra ho an'ny fahasalamana ao amin'ny fianakaviana ianao. Mpandraharaha hotely maro, tobim-pahasalamana ary fandroana mafana no nahafantatra ny olanao ary namaha izany ho anao. Mihabetsaka ny trano fandraisam-bahiny misy fianakaviana dia miompana amin'ny filan'ny fahasalaman'ny ray aman-dreny tanora ary toy ny hotely fahasalamana maro natao ho an'ny fianakaviana. Ry mpikarakara za-draharaha manome aina, mikarakara sy manara-maso ny zanakao rehefa mandro amin'ny sôkôla mafana ianao na milomano ao amin'ny pisinina sira. Azo atao ihany koa ny manamboatra sakafo hariva momba ny labozia mandritra ny roa, raha spaghetti misy saosy voatabia na pizza nohanina ao amin'ny faritry ny ankizy.
Amin'ity fialantsasatra ity dia mahazo ny vola laniny ny mpianakavy rehetra ary mitondra azy ireo ny fiadanam-po any an-trano. Na inona na inona andehananao fialan-tsasatra miaraka amin'ny fianakavianao, amin'ny maha mpivady na irery anao, dia alamino tsara izany. Etsy ankilany, ny hotely rehetra dia azo antsoina hoe hotely fahasalamana, satria tsy voaaro ilay teny. Mba hahafahanao mahita ny lalanao manodidina tsara kokoa, ny Fikambanana Wellness Association dia nametraka mason-tsivana mifanaraka amin'ny kalitao ary ny hotely dia afaka mangataka tombo-kase momba ny kalitao mifanaraka amin'izany. Ankoatra ny zavatra hafa, tombana ny tahan'ny fampisehoana ny vidiny, ny fahaizan'ny mpiasa, ny ambiansy ary ny fahadiovany. Jereo àry ity tombo-kase ity ary jereo manodidina ny tolotra mora vidy. Avy eo dia azonao antoka fa ho salama ihany koa ianao ao amin'ny trano fandraisam-bahiny voafantina, ary tsy hovesarana ny tetibola ao amin'ny fianakaviana.
Mialà sasatra tsara amin'ny fialantsasatry ny fahasalamana ary ento miaraka aminao amin'ny fiainana andavanandro izany fihetsika mahafinaritra izany.
Mampianatra ny dia | Fialan-tsasatra sy fialan-tsasatra
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 8. Aprily 2020 15. Jolay 2021 Sokajy Fialan-tsasatra, fitsangatsanganana ary fialan-tsasatra, WellnessKeywords fialam-boly, fialan-tsasatra, Wellness, Fialan-tsasatra Wellness, Zeit für sich
indray Lahatsoratra taloha: Yoga | Fahasalamana ara-panatanjahantena
more Lahatsoratra manaraka: Matory tsara | FAHASALAMANA